Fingotra Foam Sheet Insulation
BROADFLEX Fingotra fingotra taratasy insulation dia nandalo BS476, FM, SGS, UL, ASTM taratasy fanamarinana ary manana rafitra fitantanana kalitao henjana. Miaraka amin'ny kalitao tsara, ny vidiny mifaninana, ny fandefasana haingana, dia nanondrana ny foitra fingotra ho any amin'ny firenena 80 mahery izahay.
Fingotra Foam Tube Insulation
Manangana fitaovana famokarana avo lenta sy fitaovana fitiliana be pitsiny izahay mba hiantohana ny kalitaon'ny fantsona fingotra ary ny vokatray dia nandalo ny mari-pankasitrahana BS476, FM, SGS, UL, ASTM.
(9,13,19,25,32,40 ary 50mm)
1/4" ID hatramin'ny 6" IPS (ID 6 hatramin'ny 168mm)
BROADFLEX Fingotra foam dia ampiasaina butyronitrile fingotra sy polyvinyl klôro (NBR, PVC) ho toy ny fototra akora sy ny kalitao avo lenta fanampiny fitaovana amin'ny alalan'ny foaming sy ny fomba manokana. Self-adhesive fingotra endrika apetraka mora foana ary manana endrika tsara tarehy.
Taratasy angon-drakitra ara-teknika amin'ny Foam Rubber BROAD amin'ny Self-Adhesive:
Tape Tube Foam Fingotra
BROADFLEX fingotra foam kasety ampiasaina indrindra amin'ny mifikitra inter face, famehezana amin'ny rivotra-conditioning insulation, vokatra elektronika sy ny varavarana metaly, sns.
Taratasy ara-teknika amin'ny BROAD Rubber Foam Tube Tape:
7,5m, 10m, 15m, 30m
3mm, 5mm, 10mm, 12mm, 25mm, 30mm, 50mm,
2mm, 3mm, 5mm, 10mm, 20mm
teo aloha: China Wholesale 10mm Rubber Foam Quotes Pricelist - Acoustic insulation sodina takelaka nitrile NBR PVC rubber foam - BROAD GROUP
(Pvc/Nbr) plastika fingotra
Foam fingotra 10mm
10mm Fingotra Foam Sheet
Foam fingotra 20mm
Foam fingotra 25mm
Foam fingotra 30mm
9mm Fingotra Foam Sodina
Foam fingotra adhesive
Adhesive fingotra Foam Roll
B1 Fingotra Foam Sodina
B1 Fingotra Foam Sheet
Kilasy 0 Fingotra Foam
Kilasy 0 Fingotra Foam Sheet
Foam fingotra sela mihidy
Mihidy ny sela fingotra Foam Insulation
Foam fingotra atody
Fingotra Foam Board azo ampiasaina
Foam fingotra Sheet
Foam Fingotra Tube
Atody Foam Fingotra